Ignacio Sala | | IPhone nhau, iPhone SE
Pese painosara zvishoma kune iyo inofungidzirwa zuva rekuratidzwa kweiyo nyowani iPhone 5se uye iPad Mhepo 3. Zuva rekufungidzira, richiri kumirira kusimbiswa zviri pamutemo, ndiKurume 15. Mazuva matatu gare gare, maererano ne9to5Mac's Mark Gurman, zvese zvishandiso zvichaburitswa, rakapfupika zuva pakati pehurukuro uye kutengesa. Tinoenderera mberi tichitaura nezve iPhone, panguva ino nezve iyo iPhone 7, iyo zvinoenderana nevanoongorora vese iyo 3,5 mm jack yakafa uye zvingangoita Apple haizoisanganisira mune iyo modhi nyowani, nekuti zvinoita sekunge ichapa mahedhifoni ane mheni kubatana pedyo neiyo nyowani iPhone. Nekugovera nenzvimbo ino, Apple yaizosarudza kuwedzera mutauri mutsva munzvimbo iyoyo. Mukupedzisira, zvese zvinoita senge zvinonongedza kuTSMC kugadzira iyo nyowani A10 processor yeiyo nyowani iPhone 7.Vhiki rino isu takaburitsa ziviso isinganzwisisike, ichibva kusoftware yakagadzirirwa neApple, kubvira kana tikamisa zuva pamberi pa1970, iyo iPhone inopunzika uye hazviitike pavhiki. Neraki pane mhinduro yeiyi bug , que kusiyana nekanganiso 53 kana iine mhinduro. Sezvakataurwa neHollywood Reporter, Apple kutanga kurekodha yayo yekutanga nhevedzano chete yeApple Music, vachirondedzera hupenyu hwaDr Dre, mumwe wevatangi veBeats Music uye aripo Apple executive. Dr. Dre pachavo vachatamba basa ravo.
Kana tikataura nezve mafomu, vhiki ino Teregiramu yakagadziridzwa zvakare, kuwedzera mabasa matsva anotibvumidza kutonga mapoka kwadzinotisanganisira, sarudzo huru iyo inotibvumidza kuti tirege izvo nehusiku hwese isu tiripo mumapoka akasiyana siyana kwatisingazive zvachose. Microsoft yekushandisa kwayo Fletch iyo inokutendera iwe kuti uwane nekukurumidza rudzi rwembwa iri mubvunzo nemufananidzo. Vhiki rino Mesh app yevhiki inonakidza uye muropa manhamba mutambo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone SE » Zvakanakisa zvevhiki muActualidad iPhone
AT & T inotanga kuyedza 5G: kagumi kusvika zana zana nekukurumidza kupfuura LTE